IT အလုပ်အကိုင် အခွင့်​အလမ်း​တွေ​အတွက် ကြော်ငြာ​များ တင်​ဖို. — MYSTERY ZILLION
IT အလုပ်အကိုင် အခွင့်​အလမ်း​တွေ​အတွက် ကြော်ငြာ​များ တင်​ဖို.
March 2015 in Project
ကျွန်တော်​တို. ဒီ forum မှာ အားလုံး​လိုလို​က နည်း​ပညာ​ကို စိတ်ဝင်စား​ကြ​တဲ့ ၊ နည်း​ပညာ​နဲ. ပါတ်​သက်​တာ​တွေ​ကို လုပ်ဆောင်​နေ​တဲ့ ၊ နည်း​ပညာ​လုပ်​ငန်း​ခွင်​တွေ​မှာ လက်​ရှိ​လုပ်ကိုင်​နေ​ကြ​တဲ့​သူ​တွေ ချည်း​ပဲ​လို.ထင်​ပါ​တယ်။ အခု ဆို​ရင် ပြည်​ပ​နိုင်ငံ​များ​ဖြစ်​ကြ​တဲ့ Japan , India တို.က မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ နည်း​ပညာ​အခြေ​စိုက်​လုပ်​ငန်း​ခွင်​များ အများ​အပြား​လာ​ရောက်​လုပ်ဆောင်​ကြ​လာ​တာ​တွေ​ကို တွေ.ရ​ပါ​တယ်။ အဲ့​တာ​ကြောင့် ကျွန်တော်​တို. IT ညီ​အစ်ကို မောင်​နှမ များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်​အလမ်း​များ​ရ​ရှိ​စေ​ဖို. နဲ. ဘယ်​ကုမ္ပဏီ ကတော့ ဘာ​အား​သာ​ချက် ဘာ​အားနည်း​ချက်​တွေ​ရှိ​ကြ​တယ် ဆို​တာ​ကို အချင်းချင်း​ပြော​ပြ​နိုင်​ဖို. Tab တစ်​ခု သို.မဟုတ် Tag တစ်​ခု​လောက် ရှိ​စေ​လို​ပါ​တယ်။
IT လုပ်​ငန်း​ခွင်​မှာ အလုပ်​လုပ်​လို​ကြ​သော ၊ အလုပ်​ပြောင်း​လို​ကြ​သော ၊ ကိုယ်​နဲ. ကိုက်​ညီ​တဲ့ အလုပ်​ရှာဖွေ​လို​ကြ​သော IT ညီ​ကို​မောင်​နှမ​များ တစ်​နေရာ​တည်း​မှာ လာ​ရောက်​ကြည်.ရှု​လို.ရအောင် အတွက် ရည်​ရွယ်​ချင်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ Forum Admin များ​အနေ​နဲ.က​လည်း IT ကုမ္ပဏီ​များ​ထံ​မှ အလုပ်ခေါ်ကြော်​ငြာ​ချက်​များ ကြေငြာ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်။
တစ်​ခြား​သော အလုပ်အကိုင်​ရှာဖွေ​ရေး အေဂျင်စီ​များ​လည်း ပြည်​တွင်း​မှာ အများ​အပြား​ပါ ။ ဒါ​ပေ​မယ့် ကောင်း​လား မ​ကောင်း​လား ဆို​တာ လုပ်​ကြည်.မှ သိ​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကောင်း​တယ် ဆို​လည်း ဖိတ်ခေါ်​ရအောင် ၊ အားနည်း ချက်​တွေ​ရှိ​ရင်​လည်း ကြိုတင်​သိ​ရအောင် ရည်​ရွယ်​ပြီး အခု feature request ကို ရေး​ခြင်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကျေးဇူး​တင်ပါတယ်။